Jereo Ny Akanjo Nanaovan’ireo Solontena Tibetana Tamin’ireo Fivorian’ny Kongresy Roa Tany Shina Tamin’ity Taona Ity · Global Voices teny Malagasy
Jereo Ny Akanjo Nanaovan'ireo Solontena Tibetana Tamin'ireo Fivorian'ny Kongresy Roa Tany Shina Tamin'ity Taona Ity
Voadika ny 06 Marsa 2016 17:04 GMT
“Pins an'ireo filoha” nanaovan'ireo solontena Tibetana tamin'ireo Kongresy roa. Sary nozarazaraina be tamin'ny media sosialy.
Nanomboka ny Asabotsy 5 Martsa ny herinandron'ny fandraisana fanapahankevitra mikasika ny politika nasiônaly nataon'ireo sampana lehibe ao amin'ny mpanao lalàna sy filankevitra ao Shina, ny Kongresy Nasiônalim-bahoaka ary ny Fivoriana Filankevitra Ara-politikan'ireo Vahoaka Shinoa. Eo ambanin'ny rafitra ara-politikan'ny firenena, ny Antoko Kaominista ihany no misolo tena ny vahoaka Shinoa, ary eken'ny parlemanta ny ankamaroan'ireo fanapahankevitra raisin'ny Kaomity Maharitry Birao Politikan'ny antoko.
Amin'ny tsy fananana loatra fahafahana ny handray anjara mivantana ara-politika, manao fanatanjahantena amin'ny fitetehana ary matetika manadrohadro ireo fanambaràn'ireo mpanao lalàna ao amin'ilay kaoferansa nasiônaly ireo Shinoa mpampiasa Aterineto. Amin'ity taona ity, niompana tamin'ilay “pins” (bokotra mipaingotra) misy ny sarin'ny Filoha Shinoa Xi Jinping izay hita eny amin'ny tratran'ireo solontena Tibetana ny saina sy mason'ny rehetra. Maro ireo mpampiasa Aterineto milaza fa mampahatsiahy azy ireo ny kolontsainan'ny fanompoana ny filoha izay nahazo an'i Shina nandritra ny Revolisiôna Koltoraly ilay pins, ny 1966 ka hatramin'ny 1976, fony Mao Zedong niezaka ny hanambatra ny fahefàny sy nanao anjorom-bala ireo “mpamerina mijery ny politika” tao anatin'ny antoko.
Qin Feng, mpanao gazetin'ny Hong Kong Star TV, nahatsikaritra ireo solontena Tibetana nanao pins roa eo an-tratran'izy ireo rehefa niditra tao amin'ny Efitra fanaovana ny Kongresy izy ireo. Ny iray amin'ireo pins misy ny sarin'i Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zeming, Hu Jintao, ary Xi Jinping. Ireo hafa mampiseho ny sarin'i Xi Jinping fotsiny. Ny solontena Tibetana ihany no hany nanao ireo zavatra ireo.
Navoakan'i Qin Feng tao amin'ny kaontiny afaka jeren'ny rehetra tamin'ny WeChat ireo sary ireo, ary niparitaka haingana tany amin'ireo sehatra media sosialy hafa, lasa fihetsehampo niely be tamin'ny Aterineto tao anatin'ny ora vitsy monja.
Nobahanana ela ny kaonty WeChat an'ilay mpanao gazety ary lasa tsy azo karohana tao amin'ny Sina Weibo ny teny hoe “pin an'i Xi”.
Nanana fahazarana ny mananihany arahana eso ny vaovao ireo mpampiasa Aterineto mahavita naneho hevitra amin'ireny sary ireny fony mbola afaka notsidihana be izy ireny. Nahavita nitahiry sy namerina ireo valiny maro ny China Digital Times, tao anatin'izany ireo:
@”Bei-Wai-Qiao-Mu”: Nasaina nanao ireo pins ireo solontena Tibetana sy ireo mpikambana miaraka aminy. Tokony aparitaka manerana ny firenena ny fanao toy izany. Nanjavona tato anatin'ireo telopolo taona lasa izany fomba nentim-paharazan'ny firenena Shinoa izany ary tsy tokony avelantsika higoka ny fifantohan'ny sain'ny rehetra i Korea Avaratra.
@”Ba-chu yu-qiao”: Tokony atsatony ao amin'ny nofony mihitsy ireo pins ireo mba hanehoan'izy ireo ny tsy fivadihany. Miparitaka loatra ilay zalahy manana bokotra dimy ary manohitra ny fotokevitry ny fihazonana ny tena fotony. Nandritra ny Revôlisiôna Koltoraly, tsy azo nozarazaraina ny karazana pins sahala amin'ireny.
@”Searching for flower in dream / Eo am-pitadiavana voninkazo ao anaty nofy”: Eny, tokony ahantona ao amin'ny Kianja Tiananmen ireo sary miavaka ireo.
@”Fire rock”: manao pins roa eo an-tratrany ireo diera nafahana [Nafahan'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka tamin'ny rafitry ny fanandevozana ireo Tibetana, ny taona 1950, araka ny bokin'ny tantaran'i Shina]. Ny iray misy ireo sarin'i Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zeming, Hu Jintao [ary Xi JInping] ary ny iray hafa misy an'i Xi irery. Milaza ve izy ireo fa i Xi no lehibe indrindra amin'ireo filoha rehetra?
@Jia Jia: rehefa mijery ny zava-mitranga ao amin'ny tanibe Shina, miverina indray ny kolontsainan'ny sariben'ny toetra amam-panahy Lehibe sy tsikera lehibe. Ankehitriny miverina ny pins mba hanehoana ny tsy fivadihana. Mahatsapa tena ho tsara vintana aho [hoe nandao ny firenena izy]. Mankasitraka tanteraka ireo namako sy ireo boky novakiako ihany koa aho, nanampy ahy hijanona ho olona ara-dalàna tsara ary hiaina mifanaraka amin'ireo fotokevitra fototra sasantsasany ireny rehetra ireny.